Somali - Sahan Seura ry
Sahan-seura ry waa urur caafimaad iyo arrimaha bulshada ee aan faaa’iido doon ahayn. Ujeedooyinka ururku waa kor u qaadida firfircoonida iyo xoojinta ka qaybqaadashada ee dhalinyarada iyo qoysaska, si loo helo hawlwadeeno bulshada dhaqanada baddan. Ururkayagu wuxuu shaqaynayay muddo 21 sannadood ah si mustaqabal wanaagsan loo gaadho, waxaana xubno ka baddan dad ka baddan 300 qof. Waxaana ururkayagu uu si dhow ula shaqeeyaa hay’adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn si kor loogu qaado nololwanaaga iyo wada noolaanshaha bulshooyinka kala dhaqanka duwan.
Xarunta ururka oo ah mid baaxad weyn waxayna ku taallaa xaafada Myyrmäki, ee galbeedka Vantaa. Waxaanu horgelinaa hawlo kala duwan oo ku wajahan ka qaybqaadashada iyo isku xidhnaanta, kuwaasoo kor loogu qaadayo barbaarinta iyo hiwaayadaha, seminaarada, nashaadyada xilliga xagaaga sida goobaha dalxiisyada ee xilliga xagaaga. Inta u dhexaysxa 2021- 2024 waxaanu si gaar ah ahmiyada u saaraynaa kor u qaadida iyo xoojinta firfircoonida iyo nolol wanaaga haweenka ajaanibta ah, iyada oo uu hirgelinayo mashruuca ”nolol wanaaga dumarka ajaanibta”, taasoo ay maalgelinayso STEA. Waxaanu sidoo kale ka qaybqaadanaa mashruuca ”Tsempataan” iyo mashruuca kale ee ”Tsemptaan töihin”. Mashruuca ”Tsempataan” wuxuu kor u qaadayaa nolol wanaaga iyo firfircoonida ajaanibka. Sidoo kale mashruuca kale ee ”Tsempataan töihin” wuxuu taabagelinayaa arrimaha shaqaalaysiinta iyo waxbarashada ajaanibta.
Dhammaan hawlaha aanu bulshada u qabano waa kuwa daahfuran oo la ilaalinayo sinnaanta, daahfuraanta iyo takoorid la’aanta. Hawlaha aanu bulkshada u hayno waxay u furan yihiin qof walba, iyada oo aanan loo eegaynin da’da, jinsiga, midabka, diinta iyo qowmiyada uu ka soo jeedo. Ujeedooyinka ugu waaweyn ururka waxaa ka mid ah wada noolaanshaha bulshooyinka kala dhaqanka ah. Sida uu magaca ururkayagu tilmaamayo ama uu u taaagan yahay waxaanu hormuud u nahay dhisida Finland dhaqamo-baddan.